The MYAWADY Daily: June 2017
3062017 YadanarponDaily by TheMyawadyDaily on Scribd
3062017 MyawadyDaily by TheMyawadyDaily on Scribd
Posted by myawady at 4:42 PM No comments:
Miss Earth 2017 ပြိုင်ပွဲတွင် အလှမယ် တင်စန္ဒာမျိုး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည်
ယခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၄ရက်မှ စတင်ကာ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ မနီလာမြို့၌ ကျင်းပပြုလုပ်မည့် Miss Earth 2017 အလှမယ်ပြိုင်ပွဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြု အဖြစ်အလှမယ် တင်စန္ဒာမျိုး ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
''ပြိုင်ပွဲရဲ့အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေး အတွက်ပါ။ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေ၊ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ အလှ မယ် တွေကကိုယ့် ဒေသကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင် ကိုယ့်နိုင်ငံမှာ တစ်တပ်တစ်အားပါဝင် ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ နိုင်ငံတကာမှာ ကျင်းပခဲ့တာပါ။ အလှမယ် တင်စန္ဒာမျိုးက နိုင်ငံတကာပြိုင်ပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြု အလှမယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရမှာပါ။ Miss Earth Myanmar Organization က ပထမဆုံးအကြိမ် ရွေးချယ်စေလွှတ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်တာတွေလဲ ကြိုတင်လေ့လာ သင်ယူနေပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲအတွက်လိုအပ်တာတွေလဲ စတင်ပြင်ဆင်နေပါပြီ''ဟု Miss Earth Myanmar Organization မှ တာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးက ပြောပြသည်။
အဆိုပါနိုင်ငံတကာ အလှမယ်ပြိုင်ပွဲကို နိုင်ငံပေါင်း ၈ဝကျော်မှ နိုင်ငံကိုယ်စားပြု အလှမယ်များ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင် ကြမည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာ အလှမယ်ပြိုင်ပွဲကို (၁၇)ကြိမ်မြောက် ကျင်းပပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Miss Earth 2017 အလှမယ်ပြိုင်ပွဲတွင် Evening Gownဝတ်စုံ၊ National Costume, Swimsuit, Talent နှင့် ပြိုင်ပွဲအဆင့်ဆင့် ယှဉ်ပြိုင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Posted by myawady at 4:39 PM No comments:
Humanitarian Supermarket ဝက်ဘ်ဒရာမာ ဇာတ်ကား တွင်ခေါင်း ဆောင်မင်း သမီး အဖြစ်ဆိုဂျင် သရုပ်ဆောင်မည်
နာမည်ကျော် Girl's Day အဖွဲ့မှ ဆိုဂျင်သည် ဝက်ဘ်ဒရာမာ ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်သည့် Humanitarian Supermarket တွင် ခေါင်းဆောင် မင်းသမီးအဖြစ် ပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဆိုဂျင်သည် အဆိုပါဇာတ်လမ်းတွင် လူမှုအဖွဲ့အစည်းနှင့် လူသားချင်း စာနာမှုဆိုင်ရာ ကူအညီပေးသူအမျိုး သမီးတစ်ဦးဖြစ်သည့် ယုံဟီးအဖြစ် ပါဝင်သရုပ်ဆောင် မည်ဖြစ်ကြောင်း DreamT Entertainment ကထုတ်ပြန် ထားသည်။
ယင်းဇာတ်လမ်းတွင် ယုံဟီးသည် မိမိမည်သူမည်ဝါ ဖြစ်သည်ကို ဖုံးကွယ်ထားပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းငယ် တစ်ခုတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသည့် ဂုဏ်ထူးတန်းကျောင်းသူ တစ်ဦးအဖြစ် သရုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်သည်။
မိမိအနေဖြင့် အဆိုပါ ဒရာမာဇာတ်ကားတွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခွင့် ရသည့်အတွက် ဝမ်းမြောက်မိကြောင်း၊ ယခုကဲ့သို့ ခေါင်းဆောင် မင်းသမီးနေရာမှ ပါဝင်သရုပ်ဆောင် ရခြင်းသည် ပထမဆုံး အကြိမ်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဇာတ်ကား ရိုက်ကူးရန် မျှော်လင့်စောင့် စားမိကြောင်းနှင့် ယင်းဇာတ်ကားတွင် ပါဝင်ရခြင်းဖြင့် သရုပ်ဆောင်ပညာကို လေ့လာခွင့်ရရှိကြောင်း ဆိုဂျင်ကပြောသည်။
Humanitarian Supermarket ဒရာမာဇာတ်ကားကို ဇူလိုင်လလယ်ပိုင်းတွင် ဝက်ဘ်ဒရာမာ ဇာတ်လမ်းများ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိသည့် ကွန်ရက်တစ်ခုဖြစ်သည့် Naver's TV Cast မှတစ်ဆင့် ဖြန့်ချိတင်ဆက်မည် ဖြစ်ကြောင်းသိရ သည်။
29-6-2017 Sports View Journal by TheMyawadyDaily on Scribd
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နယူးဇီလန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နယူးဇီလန် နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Steve Marshall အားလက်ခံတွေ့ဆုံစဉ်။
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ယနေ့မွန်းလွဲ ၃ နာရီတွင် ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နယူးဇီလန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Steve Marshall အား လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း)မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထွဋ်နှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ တက်ရောက်ကြသည်။
ထိုသို့တွေ့ဆုံရာတွင် သံအမတ်ကြီး၏ တာဝန်ထမ်းဆောင်မှု ကာလအတွင်း မြန်မာ-နယူးဇီလန်နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးတိုးမြှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်မှု အခြေအနေများ၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့် နယ်ပယ်များဖြစ်သည့် နို့စားနွားမွေးမြူ ရေးနှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှု၊ ငှက်ဖျားနှင့်တီဘီရောဂါ ဆေးယဉ်ပါးခြင်းအား သုတေသနပြုမှုတို့တွင် နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးရေး ကိစ္စရပ်များ၊ တပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား အဆင့်မြင့်ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့များ အပြန် အလှန်စေလွှတ်မှု၊ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်၍ ဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်နိုင်မည့် အခြေအနေများအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးသည်။
ဆက်လက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအားလုံးနှင့် မိတ်ဆွေအဖြစ် မိတ်ဝတ်မပျက် ဆက်ဆံနေသကဲ့သို့ မြန်မာ့တပ်မတော် အနေဖြင့်လည်း နိုင်ငံတကာ တပ်မတော်များနှင့် မျှတစွာဆက်ဆံရေး တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်လျက် ရှိသည့် အခြေအနေများ၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဖေါ်ဆောင်မှု ကိစ္စရပ်များနှင့် မြေမြုပ်မိုင်းရှင်းလင်းရေး ကိစ္စရပ်များတွင် လုပ်ဆောင်နိုင်မည့် အခြေအနေများအား အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Senior General Min Aung Hlaing receives New Zealand Ambassador
Senior General Min Aung Hlaing holds talks with Ambassador of New Zealand to Myanmar H.E. Mr. Steve Marshall.
Commander-in-Chief of Defence Services Senior General Min Aung Hlaing received Ambassador of New Zealand to Myanmar H.E. Mr. Steve Marshall at the parlour of Bayintnaung Villa here at3pm yesterday.
Both sides cordially discussed promotion of relations between the two countries while the ambassador was serving his duties, technological development in the areas such as dairy cow breeding and manufacturing dairy products and conducting research on malaria and tuberculosis drug resistance, exchange of visits between high ranking delegates and promotion of relations and cooperation by holding meetings between the two armed forces.
They also exchanged views on Myanmar’s continued relationship with all global countries as well as the Myanmar Tatmadaw’s extended ties with international armed forces, tasks to be carried out in Myanmar’s peace-keeping process and mine clearing.
2962017 YadanarponDaily by TheMyawadyDaily on Scribd
2962017 MyawadyDaily by TheMyawadyDaily on Scribd
28-6-2017 Knowledge Light Magazine by TheMyawadyDaily on Scribd
28-6-2017 TayZa by TheMyawadyDaily on Scribd
2862017 Myawady Magazine by TheMyawadyDaily on Scribd
SSA (၀မ်ဟိုင်း) အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအား မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိ
ဖမ်းဆီးရမိသူ SSA (ဝမ်ဟိုင်း) အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကို မော်တော်ယာဉ်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူ တွေ့ရစဉ်။
ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း)၊ နမ့်စန်မြို့၏ အရှေ့ဘက် ၂ ဖာလုံခန့်အကွာရှိ ပန်ခေါက်ဝိုးကျေးရွာအနီး လွိုင်လင်-နမ့်စန်သွားကားလမ်း၌ တပ်မတော်သားများနှင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ပါဝင်သော ပူးပေါင်းအဖွဲ့ကယာဉ် ၀င်/ ထွက်မှုများအား စစ်ဆေးလျက်ရှိစဉ် ဇွန် ၂၅ ရက် ညနေ ၅ နာရီခန့်တွင် လွိုင်လင်မြို့ဘက်မှ နမ့်စန်မြို့ဘက်သို့ စိုင်းကျော်ဦး (ဘ) ဦးဖုန်းကျော် မောင်းနှင်လာသည့် ကာဒီးနားအမျိုးအစား မော်တော်ယာဉ် အမှတ် 9F/------ တပ်ဆင်ထားသော လိုင်စင်မဲ့ မော်တော်ယာဉ်အား ရပ်တန့်စစ်ဆေးရာ ယာဉ်ရှေ့ခန်း တူးဘောက်အတွင်းမှ အချိုရည်ဘူးခွံအတွင်း ထည့်ထားသည့် ဘိန်းဖြူမှုန့် ၈ ဂရမ်ခန့် (ခန့်မှန်းတန်ဖိုးငွေကျပ် ၂ သိန်းခန့်) နှင့်အတူ ဖမ်းဆီး ရမိခဲ့သည်။
ဖမ်းဆီးရမိသူအား စစ်ဆေးမေးမြန်းချက်အရ ၎င်းသည် SSA (၀မ်ဟိုင်း) အဖွဲ့၊ ၀မ်ဟိုင်းဌာနချုပ်၌ တပ်သားအဆင့်ဖြင့် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူ ဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ရှိတွင် တာဟုန်းတံတား၌ တာဝန်ထမ်းဆောင်လျက် ရှိရာမှ သစ်အရောင်းအ၀ယ် ကိစ္စဖြင့် ကျိုင်းတောင်းမြို့ဘက်သို့ သွားရောက်စဉ် ဖမ်းဆီးခံရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။
အဆိုပါ မူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိသူအား လွိုင်လင်မြို့မ ရဲစခန်း၌တရား ဥပဒေအရ အမှုဖွင့် အရေးယူဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။